ZPW-25Bawlos dhigaya mashiinka jaraa'id kiniinka samaynta xabadaha xawaash --SAMIDA Sino Shiinaha
Mashiinka xabadaha processing
nacnac mashiinka duubo xeradan
xabadaha kiniin mashiinka riixaya
Mashiinka qodan budada
saaraayo xawaash mashiinka duubo xeradan
caanaha line-soo-saarka saaraayo
line-soo-saarka caanaha saaraayo dhadhan shukulaatada
line-soo-saarka caanaha saaraayo dhadhan wanaagsan
line-soo-saarka caanaha saaraayo dhadhan Vanilla
line-soo-saarka saaraayo xawaash
line-soo-saarka saaraayo xawaash 10g
4G line-soo-saarka saaraayo xawaash
line-soo-saarka 10g saaraayo fuud digaagga
Leexo line muhiimka ah wax soo saarka saaraayo fuud mashruuca
4G line-soo-saarka saaraayo fuud hilibka lo'da
4G saaraayo xawaash mashiinka duubo xeradan
ZGH-350 xawaaraha sare Mashiinka fiicni
10g laab duubaya mashiinka la qalab diyaarinta
ZPW-25Bawlos dhigaya mashiinka jaraa'id kiniinka samaynta seasoni ...
saaraayo nacnac kooxda quwad mashiinka duubo xeradan
ZPW-25Bawlos dhigaya mashiinka jaraa'id kiniinka samaynta xabadaha xawaash
: Function nacnac saaraayo mashiinka duubo xeradan
Taariikhda bixinta: 35 maalmood oo shaqo
Xaaladda: Cusub Place of Origin: Shanghai, Shiinaha (Dhul) Magaca Brand: ZMD
nooca: Rotary Tablet Press danab 220V / 380V Certification: ISO9001
waxyaabaha: Bir daxal laheyn aragti, 920 * 890 * 1540 mm
Ka dib-iibka Service Bixiso: Injineerada ay heli karaan adeegga
dhinto 19 dajisaa
Max. Dhexroor of Table 40mm
Max. Qotada dhammaystira 25 mm
Max.Thickness of Table 12
munaarad Speed 18r / min
Capacity Production 20520pc / h
awood motor 3kw
Feature ee qalabka
1.Easy si loo soo dajiyo, isticmaalka, iyo sii wadida.
Waxyaabaha jidhka mashiinka waa bir leh tayo sare leh.
Isticmaalka mishiin gacanta albabka The taas oo ka dhigaysa esay mishiinka si ay u isticmaalaan iyo keydinta shaqada.
2.Automatically shaandheyn style.
Xawaaraha ujawaab ah, si qoto dheer ee buuxinaya qalab iyo dhumucda Alwaaxdii waxaana laga beddeli karaa. Awoodda laga beddeli karaa sida aad doonistii.
Waxqabadka 3.Excellent, oolnimada sare iyo wax soo saarka weyn.
Awoodda max mashiinka tani waxay noqon kartaa 54000pcs / h, taas oo macnaheedu yahay in aad ka soo kaban kartaa qiimaha waqti gaaban oo aad faa'iidada ugu dhakhsaha badan.
4.Large cadaadis iyo sax sare.
Cadaadiska ugu weyn ilaa 100kn, dhexroor ugu weyn ee kaniiniyada ilaa 40mm, taas oo macnaheedu yahay xabadaha fuud ama xabadaha kale by mashiinka kiniin saxaafadda our sameeyey yihiin oo tayo weyn leh. Sidaas darteed, waxaad ku guulaysan kartaa jacaylka aad caadada iyo ballaariyo suuqa si dhakhso ah.
Wasakhaysan 5.No, qashinka jirin wax cayriin.
Mashiinka waxaa la isku aadiyo karaa budo dhuuqin sanduuq, oo ciidda ee ay mishiinka nuugo kartaa, ka dibna ciidda dib loo isticmaali karo.
Feature ee adeegga
1) Waxaan ku siin karnaa dhammaan adeegyada loogu rakibo, komishanka iyo tababar.
2) Waxaan ku siin karnaa technology-soo-saarka ee macaamiisheena, sida caanaha
3) hal sano warranty
fuud mashiinka jaraa'id qaybo kiniin saaraayo australia
Name : shekeysan cuf leh Ayaxaasi
Waxyaabaha : ahama
Features : design Gaarka ah ee budada joogto ah rarta u dhintaan. Waxaa loo beehsa karaa motor munaarad for waxqabadka wanaagsan. Socodka Waxyaabaha ay gacanta ku biiyaha Rotary.
Name : ujawaab
Waxyaabaha : ahama 304
Features: Xawaaraha wareeg ah ujawaab waa toosin by xarunta VF dhex buro in guddi korontada. Cadaadiska dhumucda iyo cadaadiska shaqada laga beddeli karaa by jihada wheel gacanta tilmaamay ka.
• Dhoofinta Standard Baako Case Wooden
2.How aan hubin karnaa in ku saabsan tayada mashiinka ka dib markii aan u saaray amarka?
3.We idinka cabsan ha noo soo diri doonaa mishiinka ka dib markii aan kuu soo dirno lacagta?
4. Waa maxay sababta aan u doortaan shirkadaadu?
maxaa yeelay, waxaan nahay mid ka mid ah ugu wanaagsan ee arimahan, iyo waxaan sidoo kale leenahay warshad gaar ah ee producting xabadaha fuud, waxaan ku siin karnaa kaalmo ugu fiican technology
5.Need mashiinada faahfaahin ama videos dheeraad ah?
fadlan si toos ah nala soo xiriir
: Previous ZPW-23B dhigaya mashiinka jaraa'id kiniinka samaynta xabadaha xawaash
: Next 4G laab duubaya mashiinka la qalab diyaarinta
Automatic Powder cube riixayo Machine
Maraq cube Press Machine
Shiinaha Tablet Press Machine
xabadaha Tablet riixayo Machine
Machine xirxirida Spice Automatic Full
saaraha Of Tablet Press Machine
Basasha Spice Cube Machine
Xirxiraan Machine Waayo Spice
Press cube duubaya Machine
Rotary Tablet Press Sale Machine
Rotary Tablet Press Machine Samaynta
Cube Spice laab duubaya Machine
Machine Spice Making Cube
Spice Machine Baako Cube
Spice Machine xirxirida Cube
Spice Cube duubaya Machine
Dhir udgoon lagu cabayn Machine
stock xabadaha Rotary Press Machine
Tablet Machine xirxirida laabma
Tablet U samaynta Makiinado
Makiinado Baako Tablet
Tablet Press Machine Shiinaha
saaraayo Candy dib dhagixiina way mashiinka duubo xeradan
ZPW-23B dhigaya mashiinka jaraa'id kiniinka samaynta se ...
quwad Side mashiinka duubo laab la arrangi ...
saaraayo xawaash dib dhagixiina way mashiinka duubo xeradan
waxyaabaha More ee mashiinada cuntada Processing